DEG DEG:- Heshiis dhowr qodob ka kooban oo goordhaw laga gaaray colaadda Gaalkacyo (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Heshiis dhowr qodob ka kooban oo goordhaw laga gaaray colaadda Gaalkacyo (AKHRISO)
Wararka naga soo gaaraya dalka Isku-taga Imaaraadka Carabta ayaa sheegaya in heshiis hordhac ah ay dalkaasi ku wada gaareen madaxweynayaasha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas iyo kan Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed.
Heshiiskaasi oo ay garwadeyn ka ahaayeen mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta iyo madaxweynayaasha maamulada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeele ayaa ka koobnaa dhowr qodob, waxaana qodobada ugu muhiimsan ka mid ahaa:-
1- In sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo dagaalka u dhaxeeya Galmudug iyo Puntland ee Gaalkacyo.
2- In sida ugu dhaqsiyaha badan lakala qaado goobaha ay isku hor-fadhiyaan ciidamada maamulada Galmudug iyo Puntland
3- In magaalada Kismaayo lagu qabto kulan dib u heshiin rasmi ah oo lagu soo afjaraayo colaadda Gaalkacyo.
4- In la sameeyo guddi wadajir ah oo ka shaqeeya dhamaan arrimaha la isku hayo, si xal kama dambeys ah loogu helo colaadda Gaalkacyo.
Ilaa iyo haatan lama oga in heshiiskaasi ay labada dhinac dhaqan gelin doonaan iyo inkale, iyadoona dhowr jeer hore heshiis ay labada dhinac kala saxiixdeen uu kusoo dhamaaday mid aan dhaqan galin.
Dhinaca kale, dowladda Imaaraadka Carabta ayaa heshiiskaasi soo dhaweeysay, iyadoona sheegtay inay garab-istaagi doonto maamul goboleedyadda ka jira dalka iyo sidoo kale dowladda federaaalk Soomaaliya.